कुन अंगमा कोठी हुँदा भइन्छ भाग्यमानी ? जान्नुहोस - Experience Best News from Nepal
कुन अंगमा कोठी हुँदा भइन्छ भाग्यमानी ? जान्नुहोस
प्रायः मानिसको शरीरमा कहीँ न कहीँ कोठी हुने गर्दछ । कोठी भएको भागमा छालाको भन्दा भिन्न रंग अर्थात कालो थोप्ला जस्तो देखिन्छ ।
कोठीले शरीरको भाग अनुसार सानो आकारको भएमा मानिसलाई सुहाउँदो समेत देखाउँछ । शरीरमा भएका कोठी कै कारण कतिपय अवस्थामा मानिस सुन्दर र कामुक समेत देखिन्छन् ।
हेर्नस् यी हुन् विश्वकै महंगा लिपिस्टीक ! कति छ त मूल्य ?